Home Wararka Gud. Maxkamada Caalamiga C/Qawi A. Yuusuf oo ka digay in Soomaaliya si fudud...
Gud. Maxkamada Caalamiga C/Qawi A. Yuusuf oo ka digay in Soomaaliya si fudud ugu biirto isdhexgalka Itoobiya
Gudoomiyaha Maxkamada Caalamiga ee Danbiyadda oo ah muwaan Soomaali ah, mudane Cabdulqaawi Axmed Yuusuf oo maanta ka hadlay kulankii looga hadlay qowmiyada Soomaliya ee ka socda dalka Jabuuti ayaa ka digay in dowada Soomaaliya ku fududaato in Soomaaliya iyo Itoobiya isku darsamaan ama Soomaliya ku biirto xulufaysi Itoobiya ha noqoto mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed.
Maxaakimka oo ka jawaabayay su’aal la waydiyay oo ahayd in uu sheego sida uu u arko in Itoobiya iyo Soomaaliya oo isku biiraan ama is xulufaystaan ayaa yiri isaga oo mgacaciisa shaqsiga ku hadalayo “ Soomaaliya inta ayan cid ku biirin ama wax ku darsan dalka kale waa in ay marka hore iyada xalisaaa dhibatada ka dhex jirta gudaheeda” isaga oo hadalkiisa sii wato ayuu ku daray. “dal waxa uu dal kale wax la qaybsan karaa ama wax ku darsan karaa markii uu isaga xaliyo dhibaatooyinka ka jira gudaha dalkiisa isla markaana mideeyo shacabkkisa”.
Hadalka ka soo yeeray maanta Maxaakimka C/Qawi A. Yuusuf ayaa waxa uu si toos ah ugu soo horjeesanayaa deg-degsiimada ku jirto Dowlada uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo oo u muuqdo mid shacabka Soomaaliya ku qasbaysa in Soomaaliya xulufo la noqoto Itoobiya.
Previous articleFeeysal cali waraabe oo si aan laga fileeyn uga hadlay uga hadlay xariga Muqtaar Rooboow
Next articleWasiir Xoosh “Robow iyo wiilasha uu adeerka u yaha waa Shabab maalin walba qarxiya Xamar”
Muxuu salka ku hayaa safarka uu RW Rooble ee Masar?
Maxkamada Caalamiga (ICJ) oo shaacisay waqtiga la dhagaysanayo dacwada Kenya iyo...